Sii Hayaha Ra’iisul Wasaaraha oo booqasho ku tegey Xabsiga Dhexe ee Xamar | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Sii Hayaha Ra’iisul Wasaaraha oo booqasho ku tegey Xabsiga Dhexe ee Xamar
Sii hayaha ra’iisul wasaaraha dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Qadar) ayaa maanta kormeeray Xabsiga Dhexe ee magaalada Muqdisho isagoo u kuur galayay xaalada guud ee xabsiga dhexe.
Sii hayaha ra’isulwasaaraha dalka ayaa warbixin ka dhageystay taliska Asluubta. Waxuu taliska asluubta waxaana uu kula dardaarmay dardargelinta qorshaha adkeynta amniga, xanaaneynta iyo horumarinta nolosha maxaabiista si loogu diyaariyo mustaqbal ifaya.
Booqashada Sii Haye Guuleed ayaa ahayd tii ugu horeysay ee uu ku tegey xabsiga magaalada Muqdisho kadib markii dhowaan ay guddi loo saaray baarista weerar ka dhacay gudaha xabsiga ay soo saareen warbixin hordhac ah oo ku saabsan dagaalkii ka dhacay Xabsiga.
Sii Hayaha Ra’iisul Wasaaraha oo booqasho ku tegey Xabsiga Dhexe ee Xamar was last modified: August 25th, 2020 by Admin